Taiwan: Fanirian’ny Taona Vaovao Tsy Hisian’ny Nokleary · Global Voices teny Malagasy
Taiwan: Fanirian'ny Taona Vaovao Tsy Hisian'ny Nokleary	Voadika ny 06 Janoary 2013 22:58 GMT
Zarao: Isan-taona, marobe ny Taiwanese mifamory eo amin'ilay toerana miavaka ao Taipei, Taipei 101, tranobe avo indrindra any Taiwan mba hijery afomanga sy hankalaza ny fahatongavan'ny taona vaovao.
Tena hafakely mihitsy ny fankalazana ny taona vaovao tamin'ity taona ity satria niara-niasa hanolotra firenena iray lavitry ny nokleary ho toa ny firariantsoa iraisan'ny vahoaka Taiwanese ho an'ny taona 2013 [zh] ireo mpihira malaza, mpikatroka mafàna fo mpiaro tontolo iainana sy ireo tanora. Nanao fampisehoana ireo mpihira tao anatin'ny fety natao ny alina nialoha ny taona vaovao ary nihira nanohitra ny nokleary.Nikarakara fanentanana fanangonan-tsonia ireo vondrona mpiaro tontolo iainana mba hametrahana marimaritra iraisana eo amin'ny samy Taiwanese mba hisian'ny politika momba ny tsy fisian'ny nokleary.
Ny hetsika faran'izay nahasarika ny maso indrindra dia ny nataon'ireo tanora mpikaroka mafàna fo marobe tamin'ny anaran'ny tambajotra Citizens No Nuke – Olom-Pirenena Tsy Mila Nokleary [zh, en, jp, de], izay nanipy kisary manohitra ny nokleary teo amin'ny Taipei 101 nandritra ny afomanga fanao isan-taona. Nampakatra ny hetsika nataony tao amin'ny Youtube ry zareo taorian'izay.
Ity ambany ity ny fanazavana ny hetsika nataon-dry zareo, ao amin'ny tranonkalan‘ilay vondrona [zh, en, jp, de]:
Miatrika loza mandondona goavana i Taiwan satria toeram-pihariana herinaratra roa ahodina nokleray, NPP1 sy NPP2, izay ny tham-pahafahany manohitra horohorontany dia vinavianina ho ambany lavitra noho ny an'ny Daiichi NPP any Fukushima, no hita manakaiky ny faritra mbola miasa amin'ny sosona volkanika… Araka ny filazan'ilay manampahaizana mpikaroka momba ny nokleary Koide Hiroaki, vantany vao mihanaka ny akora mamoaka taratra avy amin'ny NPP4 ao Taiwan, ho an'ny faritra Avaratra dia azo adika amin'ny hisian'ny fahafatesan'olona 30.000 avy hatrany izany ary mponina ao an-toerana miisa 7 tapitrisa no ho tratry ny aretina maharitra sy homamiadana. Ilay akora mamoaka taratra dia hihanaka amin'ny alàlan'ny ranomasina sy ny rivotra, hitondra ny fahavoazana ho an'ireo firenena mpiray vodirindrina, ary mety ho eran'izao tontolo izao mihitsy. Ny olona tsirairay maneran-tany no tsy afa-miala fa hifampizara ny loza mitatao sy ny voka-dratsin'ny teknolojia nokleary.
Na inona na inona resaka sy fiasàna loha avy amin'ny fiarahamonina, na olana ara-teknika mikasika ny fiainana milamina sy ny fitantànana, tsy nanazava ny olana akory ireo manampahefana avy amin'ny governemanta amin'ny tsy famaritana ny andraikitra mankany. Tonga amin'ny fetra farany ambony ny tsy fahafaliana mikasika ilay toe-draharaha.
Fotoana izao hamarànana ny ampihimamba ara-politika… Tsy anaty hirifiry sy rà latsaka, ambaranay fa i Taiwan amin'ny maha-firenena iray demaokratika azy, tsy izay 1% mahazo tombontsoa no hifehy ny fanirianay. Ary noho ny tsy fisian'ny fandraisan'andraikitry ny governemantanay manoloana ireo olona eto an-Tany, hivondrona ireo 99% ka hampiasa ny zon'izy ireo..
Izahay no 99%, ary hahita anay ianareo amin'ny farany.
Marika manohitra ny nokleary natsipy teny amin'ny Taipei 101. Sary avy amin'ny Citizens Nonuke.
Misy fanehoankevitra vitsivitsy eo ambanin'ilay lahatsary Youtube. ksutgman nahita ilay hetsika ho misy ilàna azy tokoa :
Misaotra anareo. Tohina aho. In-tapitrisa faran'izay lafatra noho ny afomanga tao amin'ny Taipei 101 ity !
Raha niteny 朱想容 kosa ny olona sasany nahita ity marika toy ny an'ny ‘alien’ (avy amin'ny planeta hafa) ity nanamaloka ny afomanga hoe :
Raha mampahatahotra anao ity sary manohitra ny nokleary ity nefa ianao tsy misaina momba ny loza ateraky ny orinasa fihariana herinaratra amin'ny alàlan'ny nokleary ao Taiwan, inona no azoko lazaina?
Raha m,aro ireo olom-pirenena no nientanentana tamin'ilay hetsika, tsy faly [zh] kosa ny mpitantana ny Taipei 101 ary mihevitra ny hanenjika araka ny lalàna ireo mpikatroka mafàna fo. Nanamarika i Sophia Hong fa raha manohintohina ny sasany ny fanipazana sary iray izay tsy mandratra na iza na iza, tokony hanaitra ny sain'ny olona ny amin'ireo vahoaka Tao izay niaina niaraka tamin'ny fako nokleary isanandro nandritra ny 30 taona:
Heverinareo ve fa azo ekena ny hisian'ny zavatra iray toy ny fako nokleary any amin'ny nosin'ny sasany? Tsy hoe mameno tahotra goavana ny fiainan'izy ireny fotsiny ny fako nokleary fa koa mahatonga azy ireny hiatrika horohoro momba ny fahasalamany mandritra ny androm-piainany manontolo!!
Vonona ny ho lasa firenena tsy misy nokleary ve i Taiwan? Ny 9 Jona 2013, ny mpanao lalàna ao Yuan dia hanomboka handinika volavolan-dalàna momba ny fampiroboroboana ny firenena tsy misy nokleary [zh], izay efa naroso tamin'ny 2005. Raha lany ity volavola ity, hitsahatra tsy hihodina ireo foibe telo fihariana herinaratra ahodina nokleary vantany vao tapitra ny fe-potoam-pahaveloman'izy ireo ary haato ny fananganana ilay foibe faha-efatra fihariana herinaratra ahodina nokleary.
Amin'izao fotoana, ireo mponina idonan'ilay asa fanorenana ilay foibe faha-efatra dia manao tsindry ny hanaovana fitsapan-kevitra[zh] hampiatoana ny fanorenana azy io amin'ity 2013 ity.
Vakio amin'ny teny Français, 简体中文, 繁體中文, 日本語, Català, Español, Italiano, English
Azia AtsinananaTaiwan (ROC)